OweChiefs akawuvali umlomo ngonozinti wePirates | News24
OweChiefs akawuvali umlomo ngonozinti wePirates
Johannesburg - Unozinti weKaizer Chiefs uBrillian Khuzwayo uthe ukholelwa ekutheni unozinti we-Orlando Pirates uBrighton Mhlongo usekhule ngokwanele futhi ubukela kakhulu kuyena.
UMhlongo wangena kulesi sikhundla ngemuva kwesigameko esibuhlungu sokudlula emhlabeni kukaSenzo Meyiwa ngonyaka owesdlule.
UMhlongo wangena kulezi zicathulo zikaMeyiwa owayegila izimanga kwiBucs naseqenjini leBafana Bafana.
UKhuzwayo uthe ucabanga ukuthi lo nozinti weBucs oneminyaka engu-24 ubudala ukwazile ukubamba ngezandla zombili leli thuba alitholile futhi uyafunda kulo nozinti osalimele.
OLUNYE UDABA: UMakola akasalali ephupha ngowe-CAF
"Ngemuva kokushona ngokuzuma kukaMeyiwa, uBrighton wangena ezicathulweni ezikhulu futhi wabhekana nesimo esinzima kwiPirates kanti ngicabanga ukuthi ukwazile ukuzibamba ziqine wakhombisa ukuthi uyindoda," kusho lo nozinti weChiefs oneminyaka engu-25 ubudala etshela iSoccerLaduma.
"Kuyangijabulisa ukubona ukuthi uyakhula futhi kuyazibonakalela ukuthi ufuna ukuba ngomunye wonozinti abahamba phambili eMzansi.
Uma ngibona uMhlongo kuyangicacela ukuthi kuningi okusamele ngikufunde ngalo mdlalo."
"Ngimbona njengonozinti ongcono kunami, kuyangijabulisa ukumbuka enza ezibukwayo kwiPirates, ngize ngifise ukube ngabe yimina lo ofana naye.
Uma singaphandle enkundleni uhlale engihlekisa futhi uyangigqugquzela, ngifuna lukhulu kuyena,"enanela.